बिहीबार, १८ असार २०७७
नायिका प्रियंकाको एक रातको रेट सवा करोड
मुम्बई । बलिउडकी स्टार नायिका प्रियंका चोपडाको एक रात विताए वाफत सय करोड तिर्नुपर्ने छ । बलिउडमा नायिकाहरुले रातमा करोडौ कमाउने गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ती मध्येकी स्टार नायिका प्रियंकाले पनि एकै रातमा सवा...
एक रात विताउन सेक्सी नायिका सन्नीको अफर
मुम्बई । बलिउड नायिका सन्नी लियोनले आफूसंग एक रात विताउने एक अफर ल्याएकी छिन् । यो दर्शकका लागि खुसीको खबर हो । दर्शकले सन्नी लियोनसंग एक रात सित्तैमा विताउन पाउने भएका छन् । जसका...
शाहरुखको थप्पडबाट घाईते र्‍याप सिङ्गर हनी सिंह ठिक भए
मुम्बई । शाहरुख खानको थप्पडबाट घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएका र्‍याप सिङ्गर हनी सिंह उपचार गरेर घर फर्किएका छन् । २ महिनाको उपचारपछि र्‍याप सिङ्गर हनी सिंह घर फर्किएका हुन् । बलिउड बजारमा उनी हराएको समाचार...
दर्शकलाई किन भेट्दैछन् शाहरुख र अमिताभ ?
मुम्बई । भारतका दुई सुपरस्टार शाहरुख खान र अमिताभ बच्चन दर्शकलाई भेट्न आउदैछन् । यस हप्तालाई विशेष भनेर यी दुई विश्वका विभिन्न ठाउँका दर्शकालाई भेट्दैछन् । यी दुई स्टारले भेट्ने ठाउँ नेपाल पनि हो...
कारभित्रै रोमान्स गर्ने जोडी धरौटीमा छुटे
काठमाडौं । व्यवसायीलाई फोन गरेर धम्की दिने मोडल साहाना बज्राचार्य तथा कान्तिपुर टेलिभिजनका पूर्व कार्यक्रम सञ्चालक सुरज गिरी धरौटीमा छुटेका छन् । दुवैले पालैपालो विज्ञापन तथा म्यूजिक भिडियो कम्पनी सञ्चालक हर्षवर्दन साहनीलाई मोबाइलबाट गाली गर्दै ‘छोरीलाई...
बलिउड ‘सेक्सी हिरो’ अर्जन रामपाल पक्राउ !
मुम्बई । भारतीय अभिनेताहरु विभिन्न काण्डमा एकपछि अर्को गरी जेल गइरहेका बेला अर्का अभिनेता पनि पक्राउ परेका छन् । भारतीय चलचित्र बजार बलिउडमा सेक्सी हिरोका रुपमा चिनिने अर्जुन रामपाललाई मुम्बई प्रहरीले अण्डरवल्र्ड डनलाई भेटेको भन्दै...
पोर्नस्टार सनी लियोनीलाई आखिर किन भयो चिन्ता ?
मुम्बई । पुर्व पोर्नस्टार तथा बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सनी लियोनी आजकाल धेरै चिन्तामा छिन् । धेरैको अनुमान डेटिङ, विहे, व्वाइफ्राइन्डको होला भन्ने लाग्ला । तर सनीको चिन्ता भने बेग्लै छ । सनीको चिन्ता छ...
शाहरुखले सडक मिचेर बंगला बनाएको आरोप
शाहरुख खानले सरकारी जमिन कब्बा गरेर घर बनाएको आरोप लागेको छ । मुम्बई स्थित बंगला ‘मन्नत’ अगाडी बनाइएको फुटपाथ सडक कब्जा बनाएर बनाइएको आरोप लागेको हो । यो आरोप सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका युवा सांसद...
जातिय छुवाछुत विरुद्ध ‘सुनपानी’को प्रदर्शन माघ २३ मा
– यमबहादुर बम धनगढी, १९ माघ । सामाजिक तथा जातिय छुवाछुत अन्त्यको सन्देश बोकेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘सुनपानी’ यहि माघ २३ गते देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । गुन्जन एण्ड कुसुम फिल्मसले सोमबार धनगढीमा पत्रकार...
‘फ्यान’का साथ नेपाल आउदैछन् शाहरुख खान, आम दर्शकले भेट्न पाउने
मुम्बई । बलिउड किङ्ग सुपरस्टार शाहरुख खान ‘फ्यान’का साथ नेपाल आउने भएका छन् । भारतीय चलचित्र बजारका धेरै कलाकारहरु नेपाल आइरहेका बेला शाहरुख खान पनि ‘फ्यान’ लाई लिएर नेपाल आउन लागेका हुन् । ‘फ्यान’...
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा हिरोईनले दर्शकलाई गिफ्ट दिने
मुम्बई । भारतीय चलचित्र बजारकी एक हिरोईनले भ्यालेन्टाइन डे को अवसर पारेर गिफ्ट दिने बताएकी छिन् । बलिउड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीसले दर्शकलाई भ्यालेन्टाइन डे मा गिफ्ट दिन लागेकी हुन् । उनको गिफ्ट भने अलि...
गौतम गुलाटी बने- ‘बिग बोस’ (फोटो फिचरसहित)
विजय थापा भारतीय लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बिग बोस’को आठौँ संस्करण गौतम गुलाटीले बाजी मारेका छन् । आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी करिष्मा तन्ना र प्रितम सिंहलाई उछिन्दै उनले यो सिजनको ‘बिग बोस-८’ जितेका हुन् । जितसँगै गुलाटीले...
« 1 … 439 440 441 442 443 … 471 »
नेपाल प्रहरीका ‘कर्ण–युधिष्ठिर’ !
नेकपाभित्र सकस : उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा ओली पक्षीय नेता प्रचण्डनिवास खुमलटारमा
धेरै नेता मृत्यु जितेर आएका छन्, फराकिलो भएर सोचौँ : मन्त्री भट्टराई
प्रहरीले उल्टो जाहेरी लेख्दा…
यी भारतीयले लिए नेपाली नागरिकता, नेपालमै बिहे गरी बच्चा नै जन्माए
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १७ कोरोना संक्रमित
७० लाख बढी सलह नेपाल आइसके, ५० जिल्लामा पुगिसके
किन गरियो संसद अधिवेशन अन्त्य ? के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ?
त्रिशुलीमा सवारी खस्यो, खोजी कार्य जारी
बिहीबारदेखि श्रम स्वीकृति खुला
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
म्याग्दीका कोरोना संक्रमित ४५ दिने शिशुको मृत्यु
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस